Demba Ba oo qalliin lagu sameeyay kana soo kabanaya dhaawicii gaaray…. (Daawo Muuqaalka) – Gool FM
Demba Ba oo qalliin lagu sameeyay kana soo kabanaya dhaawicii gaaray…. (Daawo Muuqaalka)
(Shenghai) 26 Luuliyo 2016 – Weeraryahanka Kooxda Shenghai Shenhua iyo xulka Senegal Demba Ba ayaa ka soo kabanaya dhaawicii naxdinta lahaa ee gaaray ee uu kaga jabay Laf dheerta Bidix, waxaana haatan lagu sameeyay qalliin lagu guuleystay.
Ba, oo 31 jir ah ayaa taageerayaashiisa u xaqiijiyay in uu si tartiib tartiib ah uga soo reynayo dhaawicii gaaray ciyaarahana uu dib markale ugu soo noqon doono marka uu si toos ah u soo bogsado.
Ciyaaryahan Demba ayaa dhaawacan khatarta ah ee gaaray kaddib waxaa dadka falanqeeya Isboortigu ay qiyaaseen in uu noqon karo mid uu cayaaraha oo idil kaga fariisan doono, balse rajadu haatan sidaasi way ka wanaagsan tahay.
Dhinaca kale Demba ayaa waxaa Isbitaalka ku booqday saaxiibkiisii hore ee Tim Cahill.
Day 2 after the surgery, I’m preparing slowly but surely my come back with doc Miao. Al hamdulillah 🙏🏿 #shanghai #shenhua #rs #bigblackkartal #peace
A video posted by @dembabafoot on Jul 24, 2016 at 1:32am PDT
SAWIRRO QOSOL LEH: Baraha Bulshada oo weli ku maadsanaya Timaha Blondada ee Lionel Messi
XOG: Maxaa ilaa iyo haatan loo dhammeyn la'yahay heshiiska uu Paul Pogba ugu biirayo Manchester United?